Somali – Tiir
Su,aal muhiim ah oo kusocota dhallinyarada
Baaq kusocda Doowladda Somalia
Mahadcalin kusocota Madaxda Soomaaliya
Xisbiga Tiir waxuu mahadcelin udirayaa dhamaan madaxda Soomaaliya sida ay uxaliyayn khilaafkii sookala dhaxgalay Madaxweenaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayagoon kabix dalkeena Soomaaliya gudahiisa. Xaqiiqdii arintaas waataariikhi, waayo lagasoo bilaabo 1991 waa markii oogu horeesay oo khilaafka sookala dhaxgala madaxda Soomaaliya laguxaliyo dalka gudahiisa. Hogaan wanaagaas waxaa iskaleh ooy taariikhdu siquruxbadan uqori doontaa madaxda dalka hogaamisa hadda. Xisbiga Tiir waxuu oogu baaqi madaxda dalka in ay kudadaalaan isutanaasul, wadashaqayn, wadajir, walaaltinimo, iyo in ay kuxaliyaan dalka Soomaaliya daxdiisa khilaaf kaste oo kuyimaada ayaga dhaxdooda. Xisbiga Tiir waxuu oogu baaqi Madaxweenaha Soomaaliya Mudane Hassan Sheikh Mohamoud in uu kudoorto Ra’iisul Wasaaraha cusub aqoontiisa, kartidiisa, iyo wadanjaceelkiisa, maya qabiilka uuyahay, waayo qabiil iyo qaran isma dhaxgali karaan. Xisbiga Tiir waxuu dhamaan Xildhibaanada Soomaaliya oogu baaqayaa in ay kubadalaan nidaamka 4.5 “Xisbi-Xisbi” si-qabyaaladda la’isku bahaysan uyaraato. Sidookale in aad kasaartaan dastuurka qaranka “Jagada Ra’iisul Wasaaraha” kuna badashaan nidaam kudhisan sadex awood “Golaha madaxweenaha, Golaha baarlamaanka iyo Golha maxkamadda sare” waayo nidaam kaas waxuu yarayni khilaafka kadhaca madaxtooyada. Xisbiga Tiir waxuu xasuusin Xildhibaanada qaran in lajoogo xiligii nidaamka 4.5 lagu badali lahaa “xisbi-xisbi” siyaasadda dalkeenuna qaadanlahayd waddo cusub. Xildhibaanadii dalkoow, waxaa lajoogaa xiligii siyaasadda kudhisan sadexda awood “Madaxweene, Ra’iisul wasaare iyo Baarlamaan”, lugu badali lahaa mid kudhisan sadex gole: “Golaha madaxweenaha oo kakooban ‘madaxweene, madaxweene kuxigayn iyo wasiiro, Golaha baarlamaan, iyo Golaha Maxkamadda sare” nidaamkaas waxuu u horseedi dalkeena siyaasad kudhisan awood isudheeli tiran. Madaxdii qaranka Soomaaliyeedoow, Xisbiga Tiir marwalba waxuu diyaar idiinlayahay hiil iyo hoo waayo waxaa naga go’an in aan wadajir ubadbaadino qarankeena. Maamulka Xisbiga Tiir info@tiir.org www.tiir.org
Posted in Somali181 Comments on Xisbiga Tiir oo weydiiyey su,aal muhiim ah dhallinyarada Soomaaliyeed
Baaq kusocda Afhayeenka iyo dhamaan xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya
December 18th, 2012 by Tiir Party
Posted in Somali762 Comments on Baaq kusocda Afhayeenka iyo dhamaan xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya
Posted in Somali3,407 Comments on Away dhalintii Soomaaliyeed?
Baaq kusocda madaxda doowladda Soomaaliya
April 7th, 2012 by Tiir Party
Dhamaan xubnaha TFG,
Assalamu Calayikum Waraxmatulaahi Wabarakaatuhu,
Ogu horayntii anagoo ah Xisbiga Tiir waxaa farxad noo ah in aan u mahad celino dhamaan xubnaha doowladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya shaqada qaran ay hayaan habeen iyo maalin.
Haddaanu nahay Xisbiga Tiir waxaa noomuuqda in ay jirto Isfahan la’aan siyaasadeed oo dhaxyaala madaxda sare ee doowladda kumeelgaarka ah. Taasna waxaalagu xalinkaraa in la’ixtiraamo hadba xubnaha baarlamaanku meesha codkoodu ubato.
Haddaan la’ixtiraamin codka baarlamaanka meesha uu ubato waxaa dhicikarta in dalku yeesho dhamaadka bishan aan kujirno ee Abriil labo madaxweeyne, labo re’iisulwasaare iyo labo afhayayn baarlamaan. Taasna waxay keeni kartaan khasaare badan oo soogaara dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Haday dhacdo in dalku yeesho madax labo-labo kakooban 30 Abriil oo ah bishaan aan kujirno, waxaad ogaataan madaxda TFG doow in ay guushu raaci hadba kooxdii hesha taageerada shacabka Soomaaliyeed. Waayo, Soomaaliya waxaa iskaleh Soomaali, bulshada caalamkuna waxay kuqasbanyihiin in ay taageeraan hadba kooxda haysata taageerada shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa la’ogyahay in baarlamaanka Soomaaliya ay kulanyeeshayn kadibna u codeeyayn intoodii badnaayd in lagaqaado xilka afhayaynka baarlamaanka Shariif Hassan, kadibna waxay udoortayn gudoomiye baarlamaan Mudane Madoobe Nuunow Maxamed. Hasa ahaatee, ilaa iyo hadda madaxda doowladda kumeelgaarka ah wax ixtiraam ah maysan u muujinin codka tirada badan ee baarlamaadka.
Xaqiiqdii taasi waxay kayni kartaan in dalku yeesho madax tirobadan, taasoo ku ah meelkadhac wayn sharefta umadda Soomaaliyeed. Haddaanu nahay Xisbiga Tiir waxaan oogu baaqaynaa dhamaan madaxda sare ee doowladda TFG da in ay xushmeeyaan codka xubnaha baarlamaanka hadba maasha uu ubato waayo xilka ayhayaan waxay kuhelayn codka baarlamaanka.
Markastana xubnaha baarlamaaku waxay xaq uleeyihiin hadba kiishaqadiisa gudan waaya oo kamid ah madaxda sare ee doowladda TFG da in xilkii ay kaqaadaan midcusubna doortaa. Ugu danbayntii, waxaan oogu baaqaynaa madaxda sare ee doowladda TFG da in ay isu tanaasulaan ayagoo isticmaali halkudhiga Xisbiga Tiir “Midnimo + Wadashaqayn + Isutanaasul = Hormar”.
Posted in Somali19 Comments on Baaq kusocda madaxda doowladda Soomaaliya